Ihe omimi: ichu ihe omuma na ihe kpatara ya
Google mejuputara ihe omuma a n'ime afo 2006 site na melmingbird melite. Ọ bụ ịchọpụta ọmarịcha n'ihi na ọ na-atụle ọtụtụ ihe mgbe ị na-aza ajụjụ. Nwelite nke Hummingbird mere ka a mata ihe kariri nani ajụjụ mkparita uka. Ọ na-enyocha okwu ọ bụla, gburugburu, na ozi ndị ọzọ.
Ryan Johnson, ọkachamara ọkachamara , na-ekwu na nyocha ọchụchọ na-agụnye iji ọtụtụ ihe onwunwe. The search engine na-eji ozi ọ chịkọtara oge iji nye nsonaazụ ziri ezi - best bay area web design firms. Ozi a gbakọtara oge na-agụnye ọdịiche nke Google nwere ike ịmụta na ịdabere na akụkọ ihe mere eme, usoro mpaghara, oge, mmepe edemede na ihe ndị ọzọ dị otú ahụ na-eme ka a mata usoro nyocha
Tụlee mgbe ị pịnyere ajụjụ mkparịta ụka ma nweta nchọta ziri ezi. Ma ọ bụ mgbe ị na-ahụ nsonaazụ ndị na-egosi nkwụpọ ụkwụ na-emehie ihe, ozi gosipụtara na njirimara karịa usoro ederede. Ihe ndị a nile na-ezo aka na ntụrụndụ karịa ọchụchọ ọchụchọ.
Nchọnchọ nke otu ihe na-esi na weebụ nke na-esite na weebụ. Ihe ndị a bụ ihe ọmụma nke eziokwu na ihe ọmụma nke jupụtara usoro ihe ọmụma. Ya mere, na teknụzụ na-enyere nyocha nke ntinye dabere na netwọk nke ihe ndị yiri ya.
Olee otú o si emetụta ọchụchọ
Cheedị banyere mkpado meta dịka ihe ntanetị dị mfe na weebụ weebụ, nke na-enye usoro maka ịkekọrịta data na weebụ maka ọchụchọ na nke a. Metatags na-anọchite anya obere ngwongwo nke ozi dịka ọchụchọ ntanetị iji nwetakwuo ihe ọmụma si na ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche.
Ịchọta ihe ịchọ mma na-eme ka ọ dịkwuo mma site n'ịmụta ihe ọmụma nke ụbụrụ ka o wee nwee ike ịchọta ajụjụ dị iche iche ma tụlee ihe ndị nwere ike ịchọpụta ihe mere onye ọrụ nyocha. Ọ bụrụ na nsonaazụ ọchụchọ dabere na isiokwu, ị ga-anwụrụ ọtụtụ narị, ma eleghị anya ọtụtụ puku ma ọ bụ karịa nbute tupu ị nweta nsonaazụ ziri ezi.
Yabụ, mgbe ị na-eche banyere nzi ezi na ihe dị mma, ọchụchọ nchịkọta dị mma karịa nyocha ọchụchọ dị mfe, ọ na-azọpụta oge ma mee ka ọchụchọ weebụ dị mfe. Nke a bụ ihe kachasị mma gbasara nyocha ọchụchọ.
Mmetụta na weebụsaịtị
Otu ọmarịcha mmetụta nke ọchụchọ ọchụchọ bụ na peeji ndị ahụ nwere ike ịkwalite elu n'agbanyeghị na-efu ụfọdụ okwu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ibe na-eziga ozi maka nrụzigharị osisi n'enweghị mkpụrụokwu okwu kpọmkwem, ọ ka nwere ike ịpụta n'etiti nsonaazụ kachasị elu.
Ụlọ ọrụ ọchụchọ adịghị adabere kpamkpam na mkpado aha na isiokwu ọbụla kamakwa tụlee njirimara onye ọrụ site na àgwà omume nchọgharị ha. Ihe ndị ọzọ na-emetụta nsonaazụ ọchụchọ gụnyere ihe ndị oge na ọnọdụ mpaghara.
Olee otú o si emetụta ahịa ahịa
Ọchịchọ nke mkparịta ụka na-achọ ịchọta maka ịṅụ nri. Ọ na-amanye ndị ahịa ka ha tinyekwuo ego maka ọdịnaya na readability. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ gị SEO na azụmahịa ahịa na arụmọrụ na-arụ ọrụ kachasị mma ugbu a, ọchụchọ ntanetị bụ ozi ọma maka gị. Eziokwu egosiri abughizi nchegbu mbu maka ihe omuma. Nchọgharị ọchụchọ nwere ike ịkọ ihe ọdịnaya gị ma dezie onye ọrụ nke chọrọ ya site na nsonaazụ ọchụchọ.
ọdịnaya kachasị mma bụ na o na-atụ anya mkpa onye ọrụ. Ya mere, ike ịchọpụta ihe dị elu pụtara na ị ghaghị ịghọta ọganihu gị ka mma. Mgbe ahụ ọdịnaya gị ga - ebido na nzube ha, na engines ọchụchọ nwere ike iduzi ha na peeji nke gị.